Nzọụkwụ 8 iji meziwanye Nsonaazụ Ahịa Digital gị | Martech Zone
Nzọụkwụ 8 iji meziwanye Nsonaazụ Ahịa Digital gị
Ọtụtụ n'ime anyị na-anwa ime ka mmemme mmemme ahịa anyị na-aga nke na anyị anaghị enwe oge maka imeziwanye nke ọma. Mana mmelite bụ naanị nkwa nke ịga n’ihu na-aga n’ihu ma nwekwaa ike anyị.
Dị ka ọmụmụ nke Gartner duziri, 28% nke ndị na-ere ahịa belatara usoro mmefu mgbasa ozi ọdịnala ha iji kwado ọrụ ịre ahịa dijitalụ. Nke a bụ nnukwu omume a na-atụ anya na ọ ga-aga n'ihu ma bawanye na afọ 2 sochirinụ. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị iji tinye azụmaahịa dijitalụ maka azụmahịa gị, Digital Marketing Philippines na-enye Nzọụkwụ 8 na ị nwere ike ịgbaso ịbawanye nsonaazụ nke mgbasa ozi ahịa dijitalụ dị ugbu a ma ọ bụ na-abịa.
Nzọụkwụ 8 iji melite nsonaazụ Ahịa Digital
Nyochaa ma gbanwee usoro ịzụ ahịa dijitalụ gị.
Dị gị digital ahịa otu.
Gaa na-elekọta mmadụ, mobile na obodo gị dijitalụ ahịa azum.
Mejuputa oru mgbasa ozi ahia di iche-iche.
Gbanwee usoro ahia ahia gi.
Zụlite usoro okike ihe okike.
Jiri vidiyo, ihe oyiyi na njikọ dịkwuo mma.
Mụta a mma na-aga n'ihu mindset.
Tags: digital marketingdijitalụ ahịa nzọụkwụmelite nsonaazụ ahịa dijitalụ
Gị Checklist ka Ezigbo Mobile anabata Email Kere
Dee 26, 2015 na 3: 59 AM
Apr 14, 2016 na 1: 15 PM
Echere m na Digital Marketing na-adịwanye mkpa n'oge a .Abụ m onye ọbịa na ebe nrụọrụ weebụ gị oge niile ma edebanye aha ya.